Basazotoka abasolwa kwelikaMaqatha | News24
Basazotoka abasolwa kwelikaMaqatha
PHOTO: lethiwe makhanyaAbalandeli baMaqatha becula ngaphandle kwasenkantolo ngemuva kwesinqumo sokuthi abasolwa ngeke bayithole ibheyili.
BAZOCHITHA uKhisimusi esitokisini abasolwa abayisithupha abasolwa ngokubulala lowo owayeyisishoshovu ekulwisaneni nenkohlakalo kumasipala uMsunduzi uMnuz Msawenkosi Maqatha Mchunu nowadutshulwa wabulawa ngenyaka kaNhlaba (May) kuwona lonyaka esangweni lasemzini wakhe KwaPata.
Lokhu kuza ngemuva kokuba inkantolo kaMantshi yaseMgungungundlovu ibanqabelile abasolwa ukuthi badedelwe ngebheyili.
Abasolwa okubalwa kubona nekhansela laka-ward 10 uMnuz Nkosinathi ‘TK’ Gambu bebevele enkantolo ngoLwesihlanu olwedlule nalapho befike banqatshelwa khona ibheyili.
Imansthi ithe ibona kungeke kuze kube ubulungiswa ukuthi abasolwa badedelwe ngebheyili njengoba loko kungahle kube nomthelela ekutheni kungabi nokuthula emphakathini waka-ward 10. “Ngemuva kokucubungula bonke ubufakazi obubekwe phambi kwenkantolo abasolwa bahlulekile ukuveza izizathu eziqanda ekhanda eziveza ukuthi kungani kumele badedelwe ngebheyili.
Uma bengadedelwa ngebheyili kungenzeka ukuba bagxambukele nobufakazi okanye basabise ofakazi baphinde babukele phansi nokusebenza kombuso .
“Kunamathuba futhi okuthi kungaphazamiseka ukuthula emphakathini njengoba sekuvele ngokusobala ukuthi vele kunoqhekeko ngemuva kokulethwa kwe-petition enkantolo. Ubufakazi futhi buya veza ukuthi impilo kaMnu Gambu yayivele isengcupheni njengoba sekwake kwaba khona amalunga omphakathi amuhlasela emzini wakhe ekhala ngokungalethwa kwezidingo zomphakathi. Umufi wadutshulwa abantu ababeseduzane naye kanti uma abasolwa bengadedelwa ngebheyili loko kungawethusa kakhulu umphakathi,” kuchaza iMantshi.
Amalunga omphakathi eseka uMnuz Mchunu akade esenkantolo ngaphakathi ajabule afa asho wonke athi ‘Yebo’ ngesikhathi iMantshi ithi abasolwa bayanqatshelwa ibheyili.
Amanye amalunga omphakathi aseka abasolwa avele bacweba izinyembezi ngemuva kwalesi sinqumo ngalesikhathi amanye amalunga ecula ejabulela isinqumo ngaphandle kwasenkantolo.
UMnuz Sbusiso Mkhize nongomunye wabagqugquzeli bomphakathi kuleli cala ohlangothini lukaMnu Mchunu uthe bajabule kakhulu ngesinqumo senkantolo kanti futhi sesibanikeze ithemba lokuthi ubulungiswa buzogcine benzekile ekugcineni.
“Sibonga kakhulu amaphoyisa asebenze ngokuzikhandla kuleli cala. Sibonga nenkantolo ngokuveza ukuthi basolwa abakufanele ukuthi badedelwe ngebheyili. Lokhu kuzo thumela umyalezo oqinile nakwabanye abasacabanga ukwenza into efana nalena. Ngendlela amaphoyisa asebenze ngokuzikhandla ngayo sinethemba lokuthi nabanye abalahlekelwa amalunga abo emndenini abenzi bobubi basazotholakala,” kubeka yena.